Barnaamijyada Nakhshad Sawireedka: Barnaamijyada Nakhshad Sawireedka Ugu Wanaagsan | Hal-abuurka Online
Xigasho: Hal-abuur Bloq
Thanks to horumarka cajiibka ah ee tignoolajiyada, barnaamijyo iyo barnaamijyo badan oo badan ayaa noo fududeynaya inaan shaqeyno. Warshadaha naqshadaynta garaafyada, waxay ku qasbanaadeen inay cusboonaysiiyaan oo ay horumariyaan software si loo ogolaado in badan oo ka mid ah mashaariicda aan ognahay maanta in lagu fuliyay guul weyn.
Maqaalkan ma rabno kaliya inaad ku soo laabato aduunka walxaha garaafka, laakiin sidoo kale, waxaan ku tusi doonaa qaar ka mid ah barnaamijyada naqshadeynta garaafyada ugu wanaagsan ee hadda la isticmaalo oo aan ka bixin qaabkii hore.
1.6 Sawirka Corel
1.7 Dukaanka rinjiga ee pro
1.11 Xiriiriyaha Gravit
Waxaan fahamsanahay in, barnaamijka naqshadeynta garaafyada, waa qalabka noo ogolaanaya inaan dib u taabto ama wax ka beddelno sawiro, samee sawiro, oo hadhow u xafid qaabab kala duwan.
Marka aan tixraacno dib u hagaajinta ama wax ka beddelka, waxaan ula jeednaa ku-darka ama ka saarista qaybo ka mid ah sawirka, kor-u-qaadista sawirrada midba midka kale, dib-u-taabashada midabada ama khadadka, beddelidda dhalaalka iyo isbarbardhigga, cabbirka, isku-buufinta sawirka si ay u qaadato meel yar oo fayl ahaan ah. ku badbaadi sawirka qaab kale, mari filtarrada wax ka beddela sawirka, gooya qayb ka mid ah sawirka, iyo dib u habeyn kale oo mararka qaarkood ku xiran barnaamijka aan isticmaalno.
Halkan waxaa ah liis ballaaran oo barnaamijyadaas ah oo soo baxay muddo ka dib:
Shaki la'aan, ma aanan bilaabi karin liiska Photoshop la'aanteed. Adobe Photoshop ayaa weli hormuud u ah qalabka naqshadaynta, maadaama uu yahay qalab aad u dhammaystiran, taas oo ay ugu wacan tahay agabka uu bixiyo iyo waxyaabo aan tiro lahayn oo lagu samayn karo.
Sifooyinkiisa oo dhan waxaan ku dari karnaa: kuu ogolaanayaa inaad hagaajiso sawiradasidoo kale samee sawiro iyo sawiro 3D ah. Intaa waxaa dheer, kuma koobna oo keliya goobta sawirada, laakiin sidoo kale waxay tafatirto fiidiyowyada waxayna u ekaysiisaa muuqaalada dhabta ah. Waa in sidoo kale lagu daraa in ay fududahay in la isticmaalo, xitaa kuwa isticmaala bilowga ah sababtoo ah waa barnaamij aad u dareen badan oo ku siinaya qaabab kala duwan.
Intaa waxaa dheer, waxaad marin u heli kartaa barnaamijka halkaas oo aad ku fulin karto dhammaan hawlaha naqshadeynta garaafyada oo aad u faahfaahsan iyo adiga oo isticmaalaya hal-abuurnimadaada, waxaad abuuri kartaa saameyn aad u xiiso badan.
Qalab kale oo gacanta kula jira Adobe waa Illustrator. Waa qalab kale oo ka mid ah, waxay ogolaataa abuurista calaamadaha astaantaada, iyo sidoo kale sawiro, xarfo iyo sawirro. Software-kani waxa uu ku takhasusay garaafyada vector-ka kaas oo aad ku abuuri karto wax kasta laga bilaabo astaantaada mareegahaaga ilaa sawirada joornaalada, buugaagta iyo xitaa boodhadhka.
Waxa kale oo aad caan u ah in loo isticmaalo samaynta sawiro iyo boodhadh aan la rumaysan karin. Haddii aad jeceshahay adduunka sawir-qaadista oo aadan garanaynin aaladda aad isticmaasho, tani waa tan ugu habboon. Waad ku mahadsan tahay baakadaha burushka, waxaad samayn kartaa sawiro aan dhammaad lahayn habkaaga.
Xigasho: La Hauss
Waxaan ku xireynaa xirmada Adobe ee InDesign. InDesign waa aaladda Adobe ugu fiican ee shaqada tifaftirka dhijitaalka ah, sida ay tahay way ku caawinaysaa in la habeeyo boggaga oo sameeyo halabuurka qoraallada.
Waa aaladda ugu habboon ee samaynta buug-yaraha, majaladaha iyo buugaagta qaabab dhijitaal ah iyo kuwo jireed labadaba. InDesign waxaad samayn kartaa dukumeenti onlayn ah oo is dhexgal ah maadaama ay kuu ogolaaneyso inaad isku geyso noocyada kala duwan ee maqalka, muuqaalka, slide ama qaababka animation.
Haddii wakaaladda suuqgeyntu ay leedahay waaxda tifaftirka, waxay shaki la'aan noqon doontaa qalabka ugu fiican ee dabooli kara baahiyahaaga. Sidoo kale, haddii aad rabto inaad wax badan ka ogaato qalabkan, waxaan kugu martiqaadeynaa inaad gasho casharro kale oo aan sameynay oo aad ku sii wadan karto barashada.
Haddii aan ka guurno adduunka Adobe, waxaan helnaa mid kale oo ka mid ah aaladaha aan dhammaadka lahayn ee u jira naqshadeynta. Sketch waa software naqshadaynta ku salaysan vector gaar ah oo loogu talagalay Mac.
Haddii aad rabto Aalad ugu fiican oo lagu abuurayo astaamo ama is-dhexgalyo mareegaha iyo barnaamijyada mobilada, barnaamijkani wuxuu noqon doonaa saaxiibkaaga iyo saaxiibka ugu fiican.
Waxa ugu fiican, is-dhexgalkeedu aad buu u fudud yahay in la maareeyo oo la dhex maro, markaa haddii aad tahay qof bilaw ah oo ka mid ah madal naqshadaynta, waxaad ku baran kartaa isticmaalka aad u yar.
Affinity waxaa loo tixgelin karaa kan ugu raqiisan uguna fudud in la isticmaalo nooca barnaamijyada naqshadeynta garaafka ee Adobe. Si kastaba ha noqotee, qiimihiisu ma dhimayo tayada shaqada iyo qaabka ay software-kan cajiibka ah bixiso.
Thanks to interface dareen leh, qalabkeeda iyo hawlaheeda Waxaa isticmaali kara naqshadeeyaha bilowga ah, laakiin sidoo kale waxaa isticmaali kara farshaxan khibrad badan leh.
Corel Draw waxaa la bilaabay 1992 wuxuuna calaamad u ahaa tayada ilaa hadda. Corel wuxuu ku siinayaa dhammaan waxyaabaha Qalabka loogu talagalay samee sawirada vector oo wax ka beddel sawiradaada. Waxa ay leedahay is-dhexgal aad u dareen badan, casharro, farsamooyin iyo agab si aad dhaqso u barato sida loo maareeyo.
Waxa kale oo ay leedahay hawlo kale sida hagaajinta walxaha iyo la shaqaynta bogag badan isku mar. Intaa waxaa dheer, waxa ay hore u diyaar u ah Mac.
Waa mid kale oo ka mid ah xulashooyinka weyn haddii aad jeceshahay adduunka sawir-qaadista. Ku dar midab sawiradaada qalabka ay bixiso oo baro wax badan oo ku saabsan sawirka iyo tafatirka sawirka.
Qalabkan oo lagu magacaabo, Dukaanka Rinjiga Pro waa bedel wanaagsan oo loogu talagalay tafatirka sawirka xirfadlayaasha ah, qiimaheedu aad buu uga jaban yahay barnaamijyada kale ee naqshadaynta garaafyada waxayna leedahay tijaabo bilaash ah oo 30 maalmood ah.
Barnaamijkan, waxaad samayn doontaa naqshado aad u xiiso badan iyadoo la kaashanayo qalabka sirdoonka macmal ah sida pic-to-Painting, kaas oo khuseeya shabakadaha neerfaha ee gaarka ah marka la falanqeynayo sawirka.
Waxa kale oo aad u isticmaali kartaa hababkooda kaararka salaanta, ogeysiisyada, buug-yaraha, sawirada shabakadaha bulshada iyo noocyo badan oo muuqaal ah oo loogu talagalay shabakada iyo daabacaadda. Qalabku wuxuu leeyahay aag taabasho ah, oo aad loo fududeeyay isticmaalkiisa, kaas oo fududayn doona hawlahaaga si aad u hesho natiijooyin fiican.
istuudiyaha clip, waa barnaamij sawir dhijitaal ah oo aad u badan oo caan ah oo u dhexeeya fanaaniin ka kala yimid meelo aad u kala duwan sida sawir-gacmeedka, majaajilada, manga iyo animation. Waxay leedahay habaynta noocyada kala duwan ee burushyada waxayna bixisaa waayo-aragnimo la mid ah ka qalin qalin warqad, laakiin leh dhammaan faa'iidooyinka samaynta digitally.
Clip Studio wuxuu ku habboon yahay sawir-qaadayaasha u heellan fanka khadka waana qalab aad u fudud in la isticmaalo oo ay ku jiraan moodooyinka 3D. Waxay leedahay qiimo aad u jaban iyo Waxay leedahay nooc 30-maalmood ah oo bilaash ah.
Haddii aad leedahay iPad, barnaamijkani waa mid ka mid ah kuwa ugu fiican ee sawirista iyo rinjiyeynta. Waxaa loogu talagalay farshaxan-yaqaannada iyo naqshadeeyayaasha u baahan tiro badan oo burush ah si ay ugu habboonaato abuur kasta, laga bilaabo sawir-gacmeedka aasaasiga ah, sawiridda, rinjiyeynta, burushka hawada, sawir-qaadista, iyo dhuxusha si loo buufiyo rinjiyeynta. Waxaa ku jira qalabyada sida QuickShape iyo StreamLine.
Vectr waa barnaamij bilaash ah oo ku habboon bilowgayaasha naqshadeynta garaafyada iyo sida ugu fiican, ayaa diyaar u ah qalab kasta, si aad u dhamaystirto mashruucaaga faneedka meel kasta oo aad joogto.
Sifooyinkeeda waxaa ka mid ah is-dhexgal dareen leh oo si sahlan loo isticmaali karo, la-qabsiga WordPress iyo ku-xirnaanteeda nidaamyada hawlgalka ee badan sida Windows, macOS, ChromeOS ama Linux.
Gravit Designer, waa software naqshadeynta garaafyada kaas oo waxaa ka mid ah aaladaha lagu abuuro sawirada vector, samee montages iyo boggag qeexid, iyo saameyno sawir oo kala duwan. Waxaa lagu talinayaa haddii aad ka shaqeyso samaynta agab suuq-geyneed, mareegaha, calaamadaha, naqshadaynta is-dhexgalka isticmaalaha iyo bandhigyada ama nuxurka shabakadaha bulshada.
Naqshadeeyaha Gravit wuxuu si aan kala go 'lahayn ugu shaqeeyaa Windows, macOS, Linux, iyo Chrome OS. Waxaa loo isticmaali karaa onlayn, browser-ka dhexdiisa, ama xataa iyada oo aan lahayn xidhiidh internet oo ku jira arjiga miiska haddii aad bixiso nooca pro.
Waxaan qeexi karnaa Behance, waxay shaki la'aan yihiin sida LinkedIn ee naqshadeeyayaasha garaafyada, sawir qaadayaasha iyo sawir qaadayaasha, waa mid ka mid ah shabakadaha xayeysiinta farshaxanimada ee ugu caansan caalami ahaan. Lahaanshaha Adobe, boggan waxaad ka heli kartaa boqol fannaaniin oo ka kala yimid adduunka oo dhan si aad wax yar uga barato shaqadooda oo aad u hesho dhiirigelin. Haddii aad sidoo kale rabto, waxaad abuuri kartaa akoonkaaga si aad ula wadaagto hal-abuurkaaga xirfadeed oo aad u horumariso farshaxankaaga.
Sida magaceedu soo jeediyo, Brandemia waa baloog ku qoran Isbaanishka oo diiradda saaraya calaamadaynta ama aqoonsiga shirkadda. Si habaysan, madalku waxay soo bandhigaysaa daraasado kiis oo calaamado la aqoonsan yahay, faallooyin maalinle ah, waraysiyo iyo agabyo kala duwan oo aad u badan.
Boggu waxa uu bixiyaa warar cusub oo dunida ka imanaya aqoonsiga shirkadda, talooyinka suugaanta, dhacdooyinka, koorsooyinka, iyo xataa abaal-marinaha abaal-marinaha. Waxaad ka heli doontaa dhammaan noocyada macluumaadka iyo xiisaha. Shaki la'aan, waa barta kulanka iyo dhiirigelinta taageerayaasha calaamadaynta iyo falanqaynta dhismaha astaanta.
Hadda oo aad gaartay qodobkan, ma haysatid marmarsiiyo aadan bilaabin abuurista iyo horumarinta naqshadahaaga ugu horreeya. Taasi waa sababta aanu kuugu casuunayno inaad sii wadid inaad naftaada wargeliso oo aad ogaato xataa qalab badan oo ku hadhay jidka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Barnaamijyada naqshadaynta sawirada